चिसो मौसममा छालाको स्याहार कसरी गर्ने ? « Farakkon
चिसो मौसममा छालाको स्याहार कसरी गर्ने ?
चिसोमा छाला सम्बन्धि समस्याबाट बच्न नियमित रुपमा मोइस्चराइजर क्रिमको प्रयोग गर्न आवश्यक छ । साथै, साबुनको प्रयोग प्रयोगमा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्छ । किनकी विभिन्न केमिकल्सयुक्त साबुनको प्रयोगले पनि छाला सुख्खा हुने गर्छ ।
यी चीजको प्रयोगले छालाको स्याहार गर्न सकिन्छः
सुख्खा छालामा एलोभेरा निकै प्रभावकारी मानिन्छ । एलोभेराको मद्दतले चिसो मौसममा छालालाई नरम, मुलायम तथा जीवन्त बनाउन सकिन्छ । यसको प्रयोगले छालाको स्किन टोनमा समेत सुधार आउँछ । अनलाइन खबरबाट साभार
राप्तीमा माघ ३० गतेदेखि स्वास्थ्य बिमाको फारम खोलिदै